Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda Ogadeenya oo kaalin muuqata ka Qaadanaysa Ololaha Doorashada Degmooyinka dalka Norway
Jaaliyadda Ogadeenya oo kaalin muuqata ka Qaadanaysa Ololaha Doorashada Degmooyinka dalka Norway
Oslo-10-09-2011- Waxaa si rasmi ah dalka Norway uga bilaabmay ololaha doorashada degmooyinka oo ay ku tartamayaan musharaxiin fara badan oo ka kala socda dhamaan xisbiyada kale duwan ee kajira dalka Norway.
Jaaliyadda Soomaalida Ogadeenya iyo ururka OYSU-Norway, ayaa kulan muhiim ah la qaatay mid kamid ah xisbiyadda ugu weyn dalka Norway oo lagu magacaabo SV.
Gudoomiyaha Xisbiga SV, ahna Wasiiradda Wasaaradda Waxbarashada Norway, Marwo Kristin Halvorsen, oo xisbigeedu kamid yahay saddexda urur siyaasadeed ee talada dalka hogaansha, ayaa war-bixino iyo qoraallo ka hadlaya qadiyadda Shacabka Ogadeenya ka dhageystay xubnihii la kulmay waxayna sidoo kale, gudoonsiiyeen Gudoomiyaha SV, buugaag ka hadlaya taariikhda Ogadeenya, gaar ahaan buugga lagu magacaabo (Ogaden History), oo uu qoray Mudane Mohamed Mohamud Abdi (Aamusane).
Marwo Kristin Halvorsen, ayaa balan qaaday in xisbigeedu taageero dhan walba ah la garab taagnaan doono qadiyadda Shacabka Ogadeenya, xidhiidh iyo wada-shaqeyn xooggana la yeelan doonto Jaaliyadda Soomaalida Ogadeenya ee Norway, oo ay ku ammaantay sida heerka sare ah ee ay uga soo qeyb-galeen ololaha doorashadda xisbiga SV.
Kulanka ayaa waxaa goob-joog ka ahaa Xoghayeha Jaaliyadda Norway, Mudane Abdirahman, Hoggaanka dhaqaalaha Mudane Ahmed, Xoghayeha OYSU-Norway Mudane Haaruun iyo Hassan, Hoggaanka Arimaha ururka Mudane Abdishakuur iyo Mudane Mohamed oo ka socday HAD, waxayna dhamaantood uga mahad-celiyeen Gudoomiyaha SV, ahmiyadda balaadhan ee ay siinayso qadiyadda Ogadeenya iyo sidii la isaga kaashan lahaa talaabooyinka arimahaas khuseeya ee mustaqbalka dhaw.
Sidoo kale, Marwo Amino oo kamid ah xubnaha ugu firfircoon ee ururka OYSU-Norway iyo Madaxa cadaaladda iyo Xalinta Khilaafaadka ururka OYSU-Finland Marwo Nimco Guuleed, oo booqasho hawleed ku joogtay Oslo, ayaa wasiiradda waxbarashada Norway u sheegay tacadiyadda iyo gabood-fallada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha ee lagu hayo Shacabka Soomaalida Ogadeenya ee gacanta gumeysiga itoobiya kujira.
Waxa xusid mudan in ururka OYSU-Norway, barxadda kulanka uu ka dhacayey ay ku soo bandhigeen qalabka hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida Ogadeenya, oo soo jiitay dhamaan dadkii soo xaadiray goobta.